Utyalo lwaManzi okusela - iShanghai BOQU Instrument Co., Ltd.
Ilabhoratri kunye neMitha ePhathekayo echithwe yi-Oxygen Meter
Indawo yokusela yaManzi
Onke amanzi okusela aya kucocwa kumthombo wamanzi, oqhele ukuba lichibi lamanzi amatsha, umlambo, amanzi kakuhle, okanye ngamanye amaxesha umlambo kunye noMthombo wamanzi unokuba semngciphekweni wokungcoliseka ngengozi okanye ngenjongo kunye nokutshintsha kwemozulu okanye utshintsho lwamaxesha onyaka. Ukubeka iliso kumgangatho wamanzi emva koko kukuvumela ukuba ulindele utshintsho kwinkqubo yonyango.
Ngokwesiqhelo kukho amanyathelo amane enkqubo yokusela yamanzi
Inyathelo lokuqala: Unyango lwangaphambili lwamanzi emithombo, ekwabizwa ngokuba yi-Coagulation kunye ne-Flocculation, amasuntswana aya kudityaniswa neekhemikhali ukwenza amasuntswana amakhulu, emva koko amasuntswana amakhulu aya kuzika ezantsi.
Inyathelo lesibini kukucoca, emva kwentlenga kunyango lwangaphambili, amanzi acocekileyo aya kudlula kwisihluzo, ngesiqhelo, isihluzo senziwe ngesanti, igrabile kunye namalahle) kunye nobungakanani bepore. Ukukhusela iifilitha, kufuneka sibeke iliso kwimo yovuyo, ukumiswa okuqinileyo, ialkalinity kunye nezinye iiparameter zomgangatho wamanzi.
Inyathelo lesithathu yinkqubo yokubulala iintsholongwane. Eli nyathelo libaluleke kakhulu, emva kokucoca amanzi, kufuneka songeze isibulali-zintsholongwane emanzini acociweyo, njenge-chlorine, i-chloramine, kukuyalela ukubulala ama-parasites aseleyo, iibhaktheriya kunye neentsholongwane, qinisekisa ukuba amanzi akhuselekile xa ufakwe imibhobho ekhaya.
Inyathelo lesine kukusasazwa, kufuneka silinganise i-pH, i-turbidity, ubunzima, i-chlorine eseleyo, i-conductivity (TDS), emva koko sinokubazi ubungozi obunokubakho okanye sisoyikise kwimpilo yoluntu ngexesha. Ixabiso lentsalela yeklorini kufuneka libe ngaphezulu kwe-0.3mg / L xa kukhutshwa imibhobho kwindawo yokusela yamanzi, nangaphezulu kwe-0.05mg / L ekupheleni kwenethiwekhi yombhobho. Ubunzulu bomoya kufuneka bube ngaphantsi kwe-1NTU, ixabiso le-pH liphakathi kwe-6.5 ~ 8,5, umbhobho uya kubola xa ixabiso le-pH lingaphantsi kwe-6.5pH kunye nesikali esilula ukuba i-pH ingaphezulu kwe-8.5pH.
Nangona kunjalo okwangoku, umsebenzi wokubeka iliso kumgangatho wamanzi ikakhulu wamkela uhlolo olwenziwayo kumazwe amaninzi, oluneziphene ezininzi zokukhawuleza, ukuphelela, ukuqhubeka kunye nephutha lomntu njlnjl. Inkqubo yokujonga umgangatho wamanzi kwi-Intanethi inokujonga umgangatho wamanzi iiyure ezingama-24 kunye nexesha lokwenyani. Ikwabonelela ngolwazi olukhawulezileyo noluchanekileyo kwabo bathatha izigqibo ngokusekwe kutshintsho lomgangatho wamanzi ngexesha lokwenyani. Ngokwenjenje ukubonelela abantu ngomgangatho wamanzi asempilweni nakhuselekileyo.